समृद्ध पर्वत नै हाम्रो चाहना हो
admin 8 months ago 261
पुरण गिरी अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजको अध्यक्ष हुन् । संसारभरि छरिएका पर्वतेलीहरुलाई संगठित गर्ने तथा समृद्ध पर्वतमा सहयोग गर्ने उद्धेश्यले यो संस्था स्थापना भएको हो । भर्खरै स्थापित संस्थाले आगामी दिनमा केके गर्दैछ भन्ने बारेमा विशन क्षेत्रीले गरेको अन्तर्वार्ताको संक्षिप्त अंश ः
तपाईं अन्तरास्ट्रिय पर्बत समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । खासमा यो संस्थाको उद्धेश्य र यसको कार्ययोजना केके हुन ?
म पर्वत समाजको अध्यक्षमा भर्खरै निर्वाचित भएको छु । खासमा यो संस्था नयाँ हुनाले त्यति ठुलो उद्धेश्य र योजना छैन् । हामी परिपक्व भईसकेका छैनौ । खासमा हाम्रो उद्धेश्य समृद्ध पर्वत बनाउने चाहना हो । विस्तारै समाजलाई सक्रिय बनाएर हामी कामहरु गर्नेछौँ । पर्वतको सेवामा निहित भएर लाग्ने र पर्वतको हरेक कोणबाट विकास गर्न यो संस्था लागिपर्नेछ ।
पर्बतको सेवा गर्न भनेर थुप्रै देशमा यस्ता संस्था गठन भएका छ्न र सहयोग पनि गरेका छन तर तिनीहरुको सहयोग प्रभावकारी देखिएन किन होला ?
पर्वतको सेवा गर्न यस्ता संस्था हिजो पनि जन्मेका थिए भोलि पनि जन्मिन्छन् । तर हाम्रो यो संस्था तथा सञ्जाल हामी नै विस्तार गरेका हौँ । संसारभरि छरिएका पर्वतेलीहरुको श्रम सहि ठाउँमा सहि व्यक्ति सामु पुगोस भनेर संस्था विस्तार गरेका हौँ । फरक फरक देशले काम गर्दा कसैलाई दुई पटक त कसैलाई एकपटक पनि नपुग्ने भएको हुँदा हामीले यो अवधारणा ल्याएर समाज गठन गरेका हौँ । पर्वतेलीले जन्मस्थानको लागि आफ्नो पसिनाको कमाई सहयोग गर्दा पनि संगठित तरिकाले गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो । एनआरएनले ग्लोबल सम्मेलन गरेपछि हामीले पनि बेल्जियममा धेरै कार्ययोजना ग¥यौँ । त्यसपश्चात काठमाण्डौमा एनआरएनएको सम्मेलनमा हामीले अन्तराष्ट्रिय पर्वत सेवा समाज गठन गरेका हौँ ।
यो संस्थाले पर्बतको मात्र हो कि अन्य देशको पनि ? यदि पर्वतको मात्र हो भने संस्थाले जिल्लामा के कस्ता काम गर्दैछ र त्यस्को श्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो संस्था पर्वत र पर्वतेलीको लागि मात्र हो । सहयोगी मनका धनी पर्वतेलीहरु जुन देशको जुन कुनामा बसेतापनि पर्वतलाई माया गर्ने धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरुको सहयोगपछि नै हामीले श्रोत व्यवस्थापन, च्यारिटी कार्यक्रम पनि गछौँ । हामीलाई कुनै संस्थाले बजेट दिँदैन् । पर्वतको लागि पर्वतेली‘ को सहयोग नै हाम्रो श्रोत र समृद्ध पर्वत अभियानको साधन पनि हो ।
काम भन्दा पनि चर्चामा आउनका लागि यस्ता संस्था गठन हुन्छन भन्ने अरोप छ, यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामीले चर्चामै आउनका लागि मेहेनत गरेका होईनौँ । चर्चामै आउनको लागि संगठन बनाउन पर्छ जस्तो लाग्दैन । हामीलाई भोट माग्नुपर्ने जरुरी छैन, हामी भोट माग्नुपर्ने अवस्थामा छैनौ । हामीलाई सहयोग गर्नेहरुलाई हामीले प्रतिफल दिनु पनि छैन् । यो नितान्त सेवामुलक र संसारभरिका पर्वतेलीको साझा संस्था हो । यो सामाजिक संस्था हो । गैह्र पर्वतेलीहरुको गैह्र नाफामुलक संस्था हो । हामी सेवाभावले संस्था गठन गरेका हैनौँ । कसरी हुन्छ पर्वतको सेवा गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । पर्वतेलीको एकता पनि हाम्रो उद्धेश्य हो । विदेशमा रहेका पर्वतेलीबिच भाईचारा बढाउन र पर्वतलाई सहयोग गर्न सहयोग जुटाउने संस्थाको उद्धेश्य हो । यसमा अन्य कुनै तत्व मिसिएको छैन् ।
अन्तरास्ट्रिय संस्थाहरुले नै जिल्लालाइ नमुना पनि बनाउन सक्छन, पर्बतलाइ थप विकसित र नमुना जिल्ला बनाउन तपाइँको संस्थाका योजना केके छन ?
हामी २७ अक्टोबरमा बेल्जियममा अन्तराष्ट्रिय पर्वत समाजको भेला हुँदैछ । यसमा पर्वतबाहिरका २० देशका अन्य व्यक्तिहरु पनि आउनुहुन्छ । उक्त छलफलमा हामी भर्खर जन्मेको नयाँ संस्थाले योजना बनाउनेछौँ । सबै सहभागीहरुको सल्लाह सुझाव पछि समृद्ध पर्वत बनाउन के गर्ने, कसरी गर्ने लगायतका विषयमा निर्णय हुनेछ । संस्थाको उद्धेश्य अनुरुपको काम तथा पर्वतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरकारको नजर नपुगेका धेरै विषयमा सानो भएतापनि सहयोग गरौँ भन्ने चाहना हो । यसको लागि हामीले कार्यसमिति पनि बनाएका छौँ । एउटा कोष बनाएका छौँ र यसको व्यवस्थापनबारे पनि छलफल हुनेछ । पर्वतलाई नमुना जिल्ला बनाउनमा हामीले एकदमै सक्रियतापूर्वक लाग्नेछौँ ।
हाम्रो लोकसंगीतलाइ संसारभर चिनाउन छ 1624
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको जीवन - दुई बिहे गर्नु मेरो जिन्दगीको भूल 545
नेपाल टप अञ्जलीको डाक्टर बन्ने सपना 787
‘व्यवसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्छ’ 1082
चर्चामा आउन संस्था खोलेका होईनौँ 1530
पर्वतको समृद्धिमा देशबिदेशबाट लगानी जुटाउनु पर्छ : केदारनाथ शर्मा 515
तिमिल्सीना भन्छन- इमान्दार भएर काम नगरे जनताले माफ गर्दैनन् 162
जन्मभूमीका लागि सबैले सकेको योगदान गरौँ । 519
जनताले प्रश्न सोध्न नपर्ने गरि काम गर्छु ः गिरी 204
समाजसेवा खुसी साट्ने अवसर हो : कुल आचार्य, एनआरएन उपाध्यक्ष 1034